We Fight We Win. -- " More than Media ": အေရာဝတီ ၀က်ဆိုဒ် အား ကြံ့ဖွတ် နှင့် တရုပ် ဟက်ကာများတိုက် ခိုက်
အေရာဝတီ ၀က်ဆိုဒ် အား ကြံ့ဖွတ် နှင့် တရုပ် ဟက်ကာများတိုက် ခိုက်
အေရာဝတီ အင်တာနက် စာမျက်နာ ဆိုဒ် အား တရုပ် အစိုးရ ကွန်ပြူတာသမား များ နှင့်
ကြံ့ဖွတ် ခေါင်းဆောင်များ ပေါင်း ပြီး နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ က ( မနေ့ က ) တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ကြံ့ဖွတ် နှင့် တရုပ် အစိုးရ ဟက်ကာများ က အေရာဝတီ သတင်း ဌာနစာမျက်နှာမှာ မမှန် သတင်းများ၊ မဖွယ်မရာ သတင်းများ ကို ရေးသား
ဧရာဝတီ ကိုမတိုက်ရင် ပြီးတာပဲ More then Media ရယ်။
Crazy, Coward hackers, their days of spreading false news are over. No one believe them.
ဧရာဝတီ လို့ရေးပါဗျာ အေရာဝတီ လို့ရေးထားတယ် မြန်မာစာကိုစာလုံးပေါင်းမှန်အောင်ရေးပါဗျ